Sida Loo Wado Gaadiid Badan Iyo Wax Ka Bedelka Baraha Bulshada
Jimco, Juun 24, 2022 Jimco, Juun 24, 2022 0 by Ann Smarty
Warbaahinta bulshadu waa hab fiican oo lagu dhaliyo taraafikada iyo wacyigelinta sumadda laakiin ma fududa beddelka degdegga ah ama jiilka rasaasta. Dabeecad ahaan, aaladaha warbaahinta bulshada ayaa ku adag suuqgeyn sababtoo ah dadku waxay isticmaalaan warbaahinta bulshada si ay ugu maaweelaan oo ay uga mashquulaan shaqada. Waxaa laga yaabaa inaysan aad u rabin inay ka fikiraan ganacsigooda, xitaa haddii ay yihiin kuwa go'aan qaadata. Halkan waxaa ah dhowr siyaabood oo lagu wado taraafikada oo loogu beddeli karo beddelaad, iib, iyo
Arbacada, Juun 22, 2022 Arbacada, Juun 22, 2022 0 by Elizabeth Shydlovich
Talaado, Juun 21, 2022 Talaado, Juun 21, 2022 0 by Max Koziolek
Shaacin la'aanta Angi Roofing iyo khilaafka xiisaha waa in ay soo jeediyaan xoogaa dareen ah
Monday, June 20, 2022 Monday, June 20, 2022 1 by Douglas Karr
Akhristayaasha daabacaaddaydu waxay u badan tahay inay ogaadaan inaan ka caawinnay shirkado badan oo saqafyo ah inay dhisaan joogitaankooda onlaynka ah, kobciyaan goobahooda maxalliga ah, oo u kaxeeyaan hagayaasha ganacsigooda. Waxa kale oo laga yaabaa inaad xasuusato in Angi (horey u ahaa Liisaska Angie) uu ahaa macmiil muhiim ah oo aanu ka caawinnay hagaajinta mashiinka raadinta ee gobol ahaan. Waagaas, diiradda ganacsigu waxay ku kaxaysay macaamiisha si ay u isticmaalaan nidaamkooda si ay uga warbixiyaan, u eegaan, ama u helaan adeegyo. Waxaan u lahaa ixtiraam cajiib ah ganacsiga
Compass: Aaladaha Awood-siinta Iibka ee Lagu Iibinayo Mushaharka Halkii Adeegyada Suuqgeynta
Khamiis, Juun 16, 2022 Khamiis, Juun 16, 2022 0 by Daniel Alvarado
Adduunka suuq-geynta dhijitaalka ah, agabka awood-iibka ayaa muhiim u ah hay'adaha si ay u siiyaan shaqaalaha agabka loo baahan yahay si ay si hufan ugu soo bandhigaan badeecadaha macmiilka. La yaab ma leh, adeegyada noocaan ah ayaa baahi weyn loo qabaa. Marka loo qaabeeyo oo si habboon looga faa'iidaysto, waxay ku siin karaan wakaaladaha xayeysiiska dhijitaalka ah agabyada lagama maarmaanka ah si ay u gudbiyaan wax tayo sare leh oo khuseeya iibsadayaasha mustaqbalka. Aaladaha karti-u-iibsiga ayaa muhiim u ah caawinta wakaaladaha maareynta iyo habaynta wareegga iibka. Iyaga la'aantood, way fududahay
Sida Looga Dhex Geliyo Akhristaha PDF Boggaga WordPress oo leh Soodejiye Ikhtiyaar ah
Isbeddelka sii kordhaya ee macaamiishayda ayaa gelinaya agabka goobahooda iyaga oo aan ku qasbin rajada inay iska diiwaan geliyaan si ay u soo dejiyaan. PDFs gaar ahaan - oo ay ku jiraan waraaqaha cadcad, xaashida iibka, daraasadaha kiisaska, kiisaska isticmaalka, hagayaasha, iwm. Tusaale ahaan, la-hawlgalayaashayada iyo rajadayadu waxay inta badan codsadaan inaan u dirno xaashida iibka si ay u qaybiyaan qurbaannada xirmada ee aan hayno. Tusaalaha dhow waa adeegeena Salesforce CRM Optimization. Goobaha qaarkood waxay bixiyaan PDF-yada iyadoo la soo dejisanayo
Suuqgeyntu waxay u baahan tahay xog tayo leh si ay xog u noqoto - Halgan & Xal
Talaado, Juun 14, 2022 Talaado, Juun 14, 2022 Faarax Kim
Suuqgeeyayaasha waxaa saaran cadaadis aad u daran si ay xogta u wadaan. Hase yeeshee, ma heli doontid suuq-geynayaal ka hadlaya tayada xogta liidata ama su'aal ka keenaya la'aanta maareynta xogta iyo lahaanshaha xogta ee hay'adahooda. Taa beddelkeeda, waxay ku dadaalaan inay xog-urur ku sameeyaan xog xun. Kaftan naxdin leh! Suuqgeeyayaasha intooda badan, dhibaatooyinka sida xogta aan dhamaystirnayn, qoraalada, iyo nuqulada xitaa looma aqoonsan dhibaato. Waxay ku qaadan lahaayeen saacado inay ku saxaan khaladaadka Excel, ama waxay baadhayaan plugins si ay xogta ugu xidhaan
7 Siyadood ee saxda ah DAM ay u wanaajin karto Waxqabadka astaantaada
Jimco, Juun 10, 2022 Jimco, Juun 10, 2022 Ed Breault
Marka ay timaado kaydinta iyo habaynta macluumaadka, waxaa jira xalal dhowr ah oo halkaas ka jira — ka fikir nidaamyada maareynta macluumaadka (CMS) ama adeegyada martigelinta faylka (sida Dropbox). Maareynta Hantida Dijital ah (DAM) waxay si la mid ah ula shaqeysaa noocyadan xalalka-laakin waxay qaadataa hab ka duwan nuxurka. Ikhtiyaarada sida Box, Dropbox, Google Drive, Sharepoint, iwm., asal ahaan waxay u dhaqmaan sidii baarkinno fudud oo loogu talagalay hantida dhamaadka-dhamaadka ah; ma taageeraan dhammaan hababka kor u kaca ee gala abuurista, dib u eegista, iyo maaraynta hantidaas. Dhanka DAM